बलात्कारी हरिराम गौतमलाई दरबारमार्ग प्रहरीको साथ, पीडित बालिकालाई चुप बस्न धम्की - बलात्कारी हरिराम गौतमलाई दरबारमार्ग प्रहरीको साथ, पीडित बालिकालाई चुप बस्न धम्की
नेपालबहस संवाददाता २०७४, १ भदौ, 06:14:47 PM
१ भदौ, काठमाडौं । बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा गत साउन ६ गते थुना परेका हरिराम गौतम प्रहरिको मिलेमतोमा थुनामुक्त भएका छन् । हाल दरवारमार्ग प्रहरी वृत्तमा कार्यरत डिएसपी कृष्ण पल्लि मगरले पीडित पक्षलाई घटना गम्भिर भएको र अपराधी कुनै पनि हालतमा छुट्न नसक्ने बताएका थिए । तर, गत साउन ३० गते पीडित परिवारलाई कुनै जानकारीनै नदिइकन गौतम थुनामुक्त भएपछि घटना शंकास्पद बनेको छ । पीडित र पीडितका परिवारलाई थाहै नदिइ अपराधीलाई छोडेको घटना बाहिर आएको छ । अपराधीलाई छोडे पछि दरवारमार्ग वृत्तका एक जवानले पीडित केटीको दाइलाई फोन गरेर गत साउन ३२ गते अपराधी हरिराम गौतम छुटेको जानकारी दिएका थिए ।
घटना गत साउन ४ गतेको हो । सिन्धुपाल्चोक स्थायी घर भई हाल बौद्ध बसोवास गर्दै आएकी जमुना तामाङ (नाम परिवर्तन) एक सामान्य परिवारकी सदस्य हुन् । तामाङले गाउँमा नै दुःख जिलो गरी यसै साल एसइई परिक्षा पास गरेकी थिइन् । परिक्षा पास भए सँगै उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न सहर आएकी उनी दिदीसँग बस्तै आएकी थिइन् । बढ्दो बजार मुल्य त्यस माथि पनि यो सहरमा बाँच्न धेरै गाह्रो भएको तितो यथार्थलाई महशुस गर्दै उनले विहानको समय पढ्ने र दिउँसो काम गर्ने अठोट गरेकी थिइन् । त्यसै मुताविक काम खोज्ने शिलशिलामा होराइजन मल्टि प्रोपोज एण्ड जव प्लेसमेन्ट सर्भिस नामक एक कम्पनीमा कटिङ पेस्टिङको तालिम गर्न पुगेकी थिइन् ।
त्यसै शिलशिलामा होराइजन मल्टि प्रोपोज एण्ड जव प्लेसमेन्ट सर्भिसका संचालक हरिराम गौतमको आँखा उनी माथि परेको थियो । अनेक बाहान गरेर गौतम उनलाई एकान्तमा पर्ने प्रयास गरिरहने कुरा तामाङ किशोरीले संवादका क्रममा बताइन् । सँधै झँै तालिममा जाने उनी (साउन ४ गते) सो दिन पनि तालिममा गएकी थिइन् । त्यस दिन ११ बजे देखि १ बजेसम्म तालिममा बसेकी थिइन् । सदाझैँ तालिम सकिए पछि घर फर्किने उनीनलाई त्यस दिन भने गौतमले रोके ।
गौतमले कम्पनीमा कामको चाप भएको र त्यो काम सक्नुपर्ने भएकाले उनलाई बस्न भनेका थिए । तामाङले बस्न इन्कार गरे पछि गौतमले हस्पिटलमा आफ्नो मान्छे बिरामी भएको र कम्पनीमा कामको चाप भएको बताएको तामाङ बताउँछिन् । गौतमले पछि ढिला भए ट्याक्सीमा घर छोड्दिने कुरा गरेपछि उनी बसेकी थिइन् । काम छ भन्दै ट्याक्सिमा राखेर गौतमले उनलाई सहरका विभिन्न भाग घुमाएको तामाङले बताइन् ।
पहिलो पटक सहर अएकी तामाङलाई धेरै कुरा नौलो लागेको र आफुलाई सबै ठाउँको बारेमा जानकारी नभएको बताइन् । उनले भनिन् ः– ‘साँझको समय भइसकेको थियो । झरी परिरहेको थियो । त्यस समय एउटा होटल अगाडी लगेर खाजा खाने भन्दै मलाई ट्याक्सीबाट ओह्राल्यो ।’
‘होटलमा पुगेर उसले मादकपदार्थ सेवन गर्यो । मलाई पनि सेवन गर्न कर गरेको थियो । घरी फोन गर्ने र घरी मादकपदार्थ सेवन गर्ने गरेको उसले मलाई बेलुकी ७ बजेसम्म सँगै राखेको थियो ।’ उनले थपिन् ः– ‘ढिला भैसकेको थियो । एक्लै जन पनि कुनै ठाउँ बारे मलाई थाहा थिएन । घर पु¥याइदिन भन्दा पनि, पुर्याइदिन्छु भन्दै पिइ रहेको थियो । ट्याक्सी खोज्ने निहुँ बनाएर त्यसै बेला ऊ होटलबाट बाहिर निस्कीयो ।
‘त्यस पछि करिब १०–१५ मिनेट पछि गौतम म भएको ठाउँमा आयो । उसले मलाई पनि बाहिर बोलायो र नजिकै रहेको अर्को होटलतिर जान इसारा ग¥यो । मलाई विस्तारै होटल तर्फ लग्यो र मेरो मोवाइल पनि खोस्यो । उसको यो क्रियाकलापले मलाई डर लागेको थियो । उ होटल माथि पुगेको थियो र मोवाइल लिन आउ भन्दै मलाई बोलायो । म पनि होटलको तल्ला माथि गएँ । त्यही समयमा मलाई उसले एक छिन काम छ भन्दै कोठाभित्र तान्यो । मलाई डर, धम्कि दिँदै जवर्रजस्ती गर्न खोज्यो । म भाग्न खोजेँ तर भागेमा ज्यानै जाने धम्की दियो । कसको अनुमतिले यहाँबाट भाग्छेस् ?’–उनले भनिन् । भनेको नमान्ने भए घर नपु¥याउने भन्दै मलाई मातेको तालमा उसका हर्कत सुरु गर्यो ।
त्यस पछि मैले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन धेरै प्रयास गरेँ र सफल पनि भएँ । उसले घर पुर्याउने बाहानामा मलाई रातै भर बन्धक बनायो । म रात भर उ सँग लडि रहेँ । उसले अनेक कोशिष गर्यो तर मैले मानिन । म यति धेरै रोएँ, कराएँ । तर बन्द कोठामा मेरो चित्कार कसले सुन्ने । जब विहान भयो मेरो मोवाइल पनि स्वीच अफ भएको थियो । त्यस पछि म त्यस होटलबाट भागेर सोध खोज गर्दै गाडि चढेँ र बौद्ध आएँ ।
घर आएपछि दिदी र दाइले मलाई झपार्न थाल्नु भयो । बिना खबर कहाँ गएको ? कहाँ बसेर आएको ? भन्ने प्रश्नहरु मलाई गरेपछि मैले सबै सत्य घटना दिदी र दाइलाई भनिदिएँ ।
पीडितको दाजुका कुरा
बहिनीको यो कुरा सुनेपछि म र मेरो भाइहरु हरिराम गौतमलाई त्यस दिनको घटनाबारे सोध्न उसकै अफिस नजिकै पुगेका थियौँ । सोधखोज गर्न थालेपछि उ निकै डराएको थियो । हैन मैले केही गरेको छैन । म त्यस्तो होइन भन्दै उसले उम्कन र भाग्न खोज्ने प्रवृत्ति देखाउन थाल्यो । गौतमले एक्कासी हामी माथि हात हाल्न थाल्यो । त्यस पछि हामीले उसलाई रोक्न खोज्यौँ तर उसले लगातार हामी माथि प्रहार गर्न छोडेन र परिस्थीतिले झडपको मोड लियो । स्थानीयहरुको भिड लागिसकेको थियो । स्थिती असामान्य भएपछि म आफैँले १०० मा फोन गरी प्रहरिलाई बोलाएँ । त्यस पछि हामी सबै मिति २०७४ साउन ६ गते बालाजु प्रहरी वृत्तमा पुग्यौँ । त्यस पछि हामीलाई सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तमा लगियो । त्यो केश बालाजु वृत्तले नै हेर्ने भनेर सोह्रखट्टे प्रहरीले हामीलाई फेरि बालाजुमा नै पठाइदियो । त्यस पछि हामीलाई दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तमा लगियो । त्यहाँ हामी दुवै पक्षको बयान लिने काम भयो । अझै पनि हामीलाई मेलमिलापमा जाऊँ भनी अपराधी हरिराम गौतमको दाइ नवराज गौतमले भने । तर हामीले अपराध गरेको घटनामा कसरी मिलमिलाप गर्ने ? हामी गर्दैनाँै । गौतमलाई कडा कारबाही गरियोस् भन्ने माग राख्यौँ । त्यस बखत मेरो बहिनी पनि सँगै थिइन् । बयान लिइसके पछि दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तका डिएसपी कृष्ण पल्लि मगरले हरिराम गौतमले कुनै पनि हालतमा छुटकार नपाउने हामीलाई बताएका थिए ।
त्यस पछि हरिराम गौतमलाई दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तमानै राखियो । म र मेरा दुई भाइलाई पुनः त्यसै दिन बालाजु प्रहरी वृत्तमा ल्याएका थिए । हामीले पनि आवेसमा गौतमलाई हातपात गरेको हुँदा केही दिन थुनामा वस्नुपर्ने भयो । करिब १५ दिन थुनामा विताएर हामी साउन २० गते तारेखमा थुनामुक्त भयौँ । तर अपराधी गौतमको विरुद्धमा हामी र हाम्रो परिवारले प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरेका थियौँ । आखिर प्रहरीकै घेराभित्र रहेका र प्रहरीले नै दोषी भनेका हरिराम गौतम कसरी निर्दोश सावित भए ? अनि थुनामुक्त भए ? जब कि बयान कै क्रममा डिएसपी कृष्ण पल्लि मगरले अपराधी कुनै पनि हालतमा छुट्न सक्दैन भनेर हामीलाई आस्वस्त पारेका थिए । यतिसम्म कि घटनाले यो रुप लिँदा पनि प्रहरीले यो घटनालाई निष्पक्ष छानबिनका लागि कुनै अदालती प्रक्रियामा लगेको थिएन । के प्रहरी नै यो अन्यायको छिनो फानो गर्ने आधिकारीक र अन्तिम नियकाय हो ? अब दोषी हरिराम गौतमको अपराध प्रहरीले नै लुकाउने हो ? होइन भने कानुनी उपचार र बयानका लागि पीडित पक्षलाई हरिराम गौतम थुनामुक्त गर्नु अघि किन बोलाइएन ? यो कुराले हामीलाई आश्चर्य तुल्याएको छ ।
२०७४, १ भदौ, 06:14:47 PM